Amandla aMntu ‘ With Massive Arms│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | I-Gvmg - Iqela leNtengiso leNtsholongwane yeHlabathi
Amandla aMntu ‘ Ngezixhobo eziMandla
Khumbula ngexa wawukwisikolo samabanga aphakamileyo. Baninzi abalinganiswa kunye nobuntu. Abafana abakhulu, imilomo emikhulu, bahlekisa abafana, gals ezihlekisayo kwaye uninzi ezininzi ngakumbi enye uhlobo abantwana. Nantsi enye ndicinga ukuba uya kuhambelana nayo. Umbono wam wokuqala ngoGillie wawunjalo 12 umnyaka ubudala. Wayemkhulu kakhulu. Ndikhumbula ndicinga ukuba andifuni ukubethwa nguye. Ukuba bendinoGillie kwiqela lam bendisazi ukuba ndinomphetho. Uncedo olunamandla. UGillie wayenguPaul Bunyon wengingqi yam. Wabane 20-22 biceps, nentamo iphantse yajikeleza. Ukulinganisa 220 iiponti, wayemi iinyawo ezintandathu i-intshi kwaye engenamafutha emzimbeni. Ayisiyiyo enye yeeblubber. Andizange ndimbone umntu onjengaye ebomini bam. Wambamba xa ehamba. Uhlobo lokuhamba umntu analo xa esazi ukuba akananto yokoyika. Igama lakhe lomnxeba lalingu Mr Clean. Wayekhangeleka kakhulu njenge icon yokucoca. Ngaphandle kokuba uGillie wayengenacici. Kwidayimani ye-baseball, UGillie wayemangalisa. Ukudubula kwakhe kwe-fungo kwabangaphandle ngaphandle komdlalo wangaphambi komdlalo oshushu ufike wachukumisa iinxalenye zezulu zihlala zigcinelwe iinqwelomoya zeenjini ezincinci. Waloyika elinye iqela. Wayejongeka njengoMickey Mantle, IHarmon Killabrew kunye noTed Kluzewski zonke ziqengqiwe zayinto enye. Ukubetha ibhola ethambileyo kulapho uGillie wagqwesa khona. Ukudubula kwakhe kwakuyimbali. Wayengomnye wabambalwa ababetha ibhola ngapha kocingo lwentsimi lwasekunene. Ucingo lwaluyilo 270 ‘ 280 iinyawo kude kwaye wakhwela 40 ukuphakama kweenyawo. Wayenguye yedwa umntu endakha ndambona ebetha ibhola ebhabhela ngapha kocingo kwiGoldenmith Avenue. Ukubetha kwakhe kwakubonakala kukuphakama njengoko babecoca ucingo. Ukwenzela mna, UGillie uhlala emele amandla, Ukuzinikezela nokuba ngumfana olungileyo. Akazange asebenzise ubungakanani namandla akhe ukubeka abanye phantsi. Yayiyindlela yakhe yokuzakha. Nokuba ubethe isandla sasekhohlo okanye sasekhohlo uya kuhlala ubona ibala elingaphandle libuyele umva kwaye i-infield itshintshele kwizikhundla ezinzulu. Zive ukhululekile ukukudlulisela nakubani na ocinga ukuba angakonwabela ukufunda ngebhola. Amandla aMntu ‘ Ngezixhobo eziMandla
Posted Articles Title : Amandla aMntu ‘ Ngezixhobo eziMandla
■Link To This Post (HTML code) : Amandla aMntu ‘ Ngezixhobo eziMandla
■Trackback URL : Amandla aMntu ‘ Ngezixhobo eziMandla
Ukugijima kweGrunion ‘ Ukuloba Ngezandla Zakho ESan Diego
Uphengululo lwePro Pro Pro elula – Kulungile okanye kubi?
Iintlanzi ze-EagleEasy – Ukukuxelela into eqhubekayo phantsi kwephenyane lakho
Iingcebiso ezisisiseko zokuzingela iTurkey
Kutheni iingcebiso zeGalufa zisebenza ngcono kuMfazi weGolfer
Ndiyihlisa Njani i-Golf Handicap
Iingcebiso ngokuthenga iiNgxowa zeGalufa
Ukuwa simahla ngesiFundo seSkydiving eCarlifonia
Iingcebiso zokuthenga ibhayisekile
Ngaba uthatha ukubaleka ngokungathí sina?
Intshukumo yeVital Golf Swing izisa impumelelo
Umxube wobugcisa beMartial-Funda iMigaqo
Iinqwelo zeGalufa: Uguquko kwiNdawo yeGalufa
Ngexesha elinye ngexesha, Ukusetyenziswa kwenqwelo yegalufa yayiyinto kuphela esisityebi eyayinokuyonwabela kwibala yegalufa. Abo babengenakukwazi ukuthenga ukusetyenziswa kweenqwelo zegalufa bahlala befumana ukurhola iiklabhu zabo emagxeni abo njengoko babehamba ibala legalufa. Kulungile, amaxesha atshintshile. Iinqwelo zegalufa ngoku ziqhelekileyo phantse kuzo zonke iikhosi zegalufa kulo lonke ilizwe. Kunqabile ukuba abadlali begalufa baphathe iiklabhu zabo emagxeni abo. Ngelishwa, ezinye zegalufa zokuzonwabisa zithanda ukuphatha ikhosi yegalufa njengetoyisi kunendlela yothutho enenjongo. Rhoqo amaxesha, ungabona ukungaziphathi kakuhle phakathi kokuzonwabisa kunye nokusetyenziswa kweenqwelo zabo zegalufa. Nangona kunjalo, Esi sisiphazamiso esinye esincinci ngenxa yenqwelo yegalufa efumana ukuthandwa. Ngokuqhelekileyo, Iinqwelo zegalufa ziyafumaneka ukurenta kwiklabhu yeklasi. Uninzi lwegalufa lusebenzisa le nkonzo. Enye indlela, ukuba unayo imali, iya kuba kukuthenga inqwelo yakho yegalufa. Nangona kunjalo, oku kuyabiza, kodwa awunyanzelekanga ukuba uhlawule irente yenqwelo yegalufa nanini na usiya ekhosini. Iinqwelo zegalufa ziyafumaneka ukuba zithengwe nokuba zintsha okanye zisetyenzisiwe. Iinqwelo ezintsha zegalufu zingathengwa naphi na ukusuka malunga $4000 ukuya $11,000 Iidola. Zininzi izinto ezinxulumene nendleko, ezifana nemodeli, umthamo wokuhlala, kunye nolunye ukhetho olongezelelweyo olunokubakho. Zimbini iintlobo zeenjini zeenqwelo zegalufa, injini yegesi okanye injini yombane. Enye into enokusetyenziswa kukuthenga inqwelo yegalufa. Iinqwelo zegalufa ezisetyenzisiweyo zitshiphu kunezintsha, kwaye ngokwesiqhelo unokufumana inqwelo yegalufa eyaneleyo engaphantsi kwe- $3000. Ukuthenga inqwelo yegalufa esetyenzisiweyo kunokuba kufana nokuthenga imoto esele isetyenzisiwe. Kuya kufuneka uyihlolisise ngaphakathi nangaphandle. Qiniseka ukuba ubuza umnini nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nenqwelo yegalufa. Ngalo lonke ixesha qiniseka ukuyithathela uvavanyo lwedrive ngaphambi kokuthenga. Iinqwelo zeGalufa: Uguquko kwiNdawo yeGalufa
Hlala N Go Pro uphononongo – Kulungile okanye kubi?
Ndigqibe kwelokuba ndibhale olu hlolo lwe-Sit N Go Pro emva kokubona isicwangciso sisebenza. Ngaba kunokwenzeka ukuba uyeke umsebenzi wakho wosuku kwaye udlale i-poker njengengcali? Ngaba ungayenza nyani $1,200 okanye nangaphezulu suku ngalunye udlala i-poker? Ndifuna ukuphendula le mibuzo nangaphezulu kolu hlolisiso lufutshane, konke ngenjongo yokukunika isishwankathelo sento onokuyilindela ngokwenyani ukuba uyifumane kwi-Sit N Go Pro. Ukusuka apho, ungazigqibela ngokwakho ukuba yinto ekufuneka ujonge kuyo wedwa. Ngaba ukhathele kukuhluza amawaka amaphepha eencwadi zesicwangciso sokudlala, kuphela kukuzifumana ulahlekelwa yimali ngexesha elizayo xa uhleli etafileni udlala? Ngaba unayo i-CD ye-poker yeaudiyo yeaudio kwimoto yakho yestereo? Ngaba ufumanise ukuba alunamsebenzi kwaphela? Isizathu sokuba uninzi lwee-e-ncwadi, iinoveli neeCD azisebenzi kungenxa yokuba ziphelelwe lixesha ngokupheleleyo. Hlala N Pro, kwelinye icala, yinkqubo ehlaziyiweyo ngokupheleleyo ebonakaliswe ukuba iyasebenza. Ixesha nexesha kwakhona, Amakhulu abalandeli be-Sit N Go Pro abonelisekileyo bayiphumezile inkqubo eqinisekisiweyo kwaye babulala kwii-SNG online. Incinci kwaye ilungele ukuhamba, ezi tumente zezona ndlela zilungileyo zokwenza imali ngokudlala hayibo. Ezinye izicwangciso azisebenzi ngokufanelekileyo njenge-Sit N Go Pro kwiitumente ze-SNG, yiyo loo nto amaxesha amaninzi uzakufumana isiphelo somdlalo ukuba awunayo i-Sit N Go Pro kwicala lakho. Xa zonke izinto zithethwe zenziwa, I-Sit N Go Pro kuphela kwesixhobo osifunayo ukukhuphisana kwinqanaba lobuchule kwiitumente ze-SNG. Kulula ukufunda nokuqonda, Hlala N Pro Pro kuphela kwesicwangciso se-poker endisicebisa ngentliziyo yam yonke. Hlala N Go Pro uphononongo – Kulungile okanye kubi?
UJerry Rice : 1983 Uyilo loMhla wokuYila
UJerry Rice wazalwa ngo-Okthobha 13, 1962 eCrawford, Nguyen. Nangona iRayisi ayizange ibe namandla okwenza ezinye iimbaleki ezinkulu, ebesoloko enesimo sokuziphatha kunye nokuzimisela kokwenza umsebenzi wenziwe. Ngesi sizathu, Ilayisi ithathwa ngokubanzi njengeyona ndawo ibalaseleyo yokufumana umdlalo. Kwaye abantu abaninzi baziva ngathi ngoyena mdlali webhola ekhatywayo omkhulu ngalo lonke ixesha ngaphandle kwesikhundla. Kwisikolo samabanga aphakamileyo Ilayisi idlalwe kwicala elikhuselayo lebhola, kwaye yayanele ngokwaneleyo ukwenza iqela le-All State. Kodwa nangona wayefeze okuninzi kwisikolo samabanga aphakamileyo, akukho Candelo le-NCAA I iinkqubo zebhola ekhatywayo ezinikezela ngezifundo. Ngaphandle kwezinye iindlela, Ilayisi yagqiba ekubeni iye eMississippi Valley State University, Inkqubo yeCandelo le-NCAA I-AA. Kwi 1983 Ilayisi yayinexesha elihle, kwaye usete iirekhodi ezininzi endleleni. Wabane 102 ulwamkelo, 1,450 iiyadi, kwaye wabizwa kwiqela lamaqela onke aseMelika. Ulandele oku kunye nexesha elifanelekileyo ngokulinganayo njengomntu ophetheyo 1984. Yonke impumelelo yakhe yebhola ekholejini yamkhokelela ekubeni anyuselwe kwiKholeji yeHlabathi yeBhola eKhatywayo yoDumo ngo-Agasti ka-Agasti 2006. Ilayisi yaqulunqwa yiSan Francisco 49ers kunye nokukhethwa kwe-16 kwinqanaba lokuqala kwi 1985 Uyilo lweNFL. Nangona iRis ilwa namathontsi kunyaka wakhe wokuqala kwi-NFL, wajika ezinye iintloko. Uligqibile ixesha kunye 927 iiyadi zivuliwe 49 ukubambisa. Kwaye ukusukela ngelo xesha lokuqala irayisi yayicimile kwaye isebenza. Ngexesha lokuthatha umhlalaphantsi wayebambe iirekhodi ezininzi zeNFL kubandakanya ulwamkelo, iiyadi zokufumana, ulwamkelo lokuchukumisa, ukuchukumisa, Zonke iiyadi zenjongo, nezinye ezininzi. Kukhuselekile ukutsho ukuba uJerry Rice ngoyena mntu wamkelekileyo ebalaseleyo owakha wadlala umdlalo webhola. Ukongeza kwizakhono zakhe zebhola ekhatywayo wayenentliziyo yentshatsheli, kunye nendlela yokusebenza yokutshatisa. UJerry Rice : 1983 Uyilo loMhla wokuYila
Ice Climbing ‘ Gcina amava akho
Ice climbing is a great way to escape the rat race and live on the edge. Hayi, your ice climbing experiences can fade with time. The best way to prevent this is to keep a ice climbing journal for your adventures. Ice Climbing Journals Take a minute to give some consideration to your most recent ice climbing experience. What sticks out in your mind besides the fact it was cold? Did you climb a waterfall? Now think about the first time you ever went ice climbing. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhumbula izinto ezimbalwa malunga nejografi, people you went with, particular ice climbing routes and spectacular views. Amava owalibeleyo aphulukene nexesha. If you keep an ice climbing journal, oku akuyi kuba njalo. Kukho iimeko ezidumileyo zabantu abagcina iijenali ngalo lonke ixesha. Kanjalo, Idayari ka-Anne Frank ngowona mzekelo mhle. Kwidayari yakhe, U-Anne wagcina ingxelo eqhubekayo yeminyaka emibini usapho lwakhe oluchithe ukufihla kumaNazi. While your ice climbing experiences better be more lighthearted, Ukugcina incwadana kuya kukukhumbuza njengoko iminyaka idlula. A good ice climbing journal combines a number of characteristics. Ekuqaleni, kufanele icwecwe ukuze ungathathi indawo engeyomfuneko kwezinye izinto. Isibini, kufanele ukuba ibe netyala lokuyikhusela kwizinto kunye nokunye. Isithathu, Ijenali kufuneka ibe neendawo ezingenanto zokubhala amanqaku akho. Isine, Ijenali kufuneka iqulethe iindawo zokukhumbuza ukuba ugcine amanqaku kwizinto ezithile. Iimpawu kufuneka zibandakanye: 1. Who you went ice climbing with, 2. The nature and quality of the ice, 3. Ngubani owadibana naye kunye nolwazi lokunxibelelana nabo, 4. Indawo kunye nemozulu, kwaye 5. Any unique things that occurred while ice climbing. 6. Iindlela ozithathileyo zomkhenkce kunye nezinye iindlela. 7. Any inside information provided by experienced locals. At the end of the ice climbing trip, Kuya kufuneka ukwazi ukufumana oku kulandelayo kwijenali yakho: 1. Iinkcukacha zonxibelelwano zabanye abakhweli odibene nabo, 2. Enough detail to provide you or a friend with a guide if you climb the location a second time. 3. Iinkumbulo zokubonakalisa kwiminyaka kamva, kwaye 4. Into oza kuyidlulisela kubahlobo bakho, abantwana nabazukulwana. To get the most out of your ice climbing journal, you should write in it just before you climb, as you summit and when you return. Doing so will give you an accurate picture of your thoughts throughout the climb. Ice Climbing ‘ Gcina amava akho
Ngaba ubuGcisa boMlo busephantsi kophuhliso?
Buyintoni ubugcisa bokulwa? Ubugcisa bemfazwe bunokuchazwa njengaso nasiphi na isakhono esinokusetyenziswa emfazweni. Igama elithi ukulwa “emkhosini.” Ke ngokwesiko, ubugcisa bokulwa bubugcisa basemkhosini. Izinto zokuqala ezithi qatha engqondweni xa uxoxa ngobugcisa bekarati bale mihla ziyaxhuma, ukukhaba, ukubetha ngenqindi, ukuvimba, ukujikajika iingqiniba, ukujija iintamo, ukuphosa, nokulwa izixhobo. Kodwa kunye nehashe, ukuphosa umkhonto, ukutola, ukulwa nomkhonto, ukulwa, ukulwa, ukulwa ngemela, umpu, umpu nompu, Ukudilizwa, Amalungiselelo, Kwaye iqhinga lokulwa linokuchazwa njengecandelo lobugcisa bemfazwe. Nantoni na enokwenziwa lijoni emfazweni bubugcisa bokulwa. Ngobugcisa bemfazwe ngokuqhelekileyo kuthethwa nge-aikido, aris, umdlalo wamanqindi, capoeria, chow gar, yayinobusi, Hukkido, hsing’i, hun gar, jeet kune do, jow gar, IJudo, jujitsu, ikarati, kempo, ukukhaba amanqindi, iimfuno isisu, ikung fu, pa kua, penjak silat, uMntanezulu othandazayo, gcina, shaolin, tae kwon do, tai chi, I-crane emhlophe, iphiko chun, wu shu kunye nokunye! Njengoko ubona uluhlu lude kwaye kuyamangalisa ukuba zingaphi iinkqubo zobugcisa bemfazwe obukhoyo kwaye zingaphi iindlela zokuzikhusela ezinokwenziwa. Rhoqo ngaphakathi kwisikolo sobugcisa bemfazwe kuye kufundiswe ukuba 'le nkqubo yeyona nkqubo ibalaseleyo kwaye yadalelwa ukubetha zonke ezinye'. Ewe wonke umculi wekarati uya kuba nembono yokuba isimbo sabo sesona silungileyo kuba eso yindlela abakhethe ukuyenza, kodwa enyanisweni le nto bayithethayo yile 'yeyona ndlela ilungileyo kum njengoko ilungele ubushushu bam kwaye ndiyayithanda imeko yokufundisa'. Ukutshintsha kobugcisa Kuyo yonke le mbali kunye nophuhliso lobugcisa bemfazwe kunye nazo zonke iinkqubo zokulwa zomntu izixhobo zethu zoqeqesho zidlale indima ebalulekileyo ekuphuculeni nasekugqibeleleni ezi nkqubo kunye nobuchule. Bonke ubugcisa bemfazwe buqhutywe yindima edlalwa zizixhobo zoomatshini nokuba zizixhobo, iimethi zete dojo, iibhodi ezaphukileyo okanye iyunifomu esiyinxibayo – Zonke ezi paraphanialia zibonakalisa ubugcisa bemfazwe kwiinkqubo zazo kunye nesitayile. Abona badlali baphambili ekubumbeni ubugcisa bethu obutsha bekarati iya kuba sisidenge somthi wemveli, amakhonkco ephiko chun, Amafutha esinyithi esinyithi kunye nenkqubo yokusebenzisa iifom kunye nekarta ziye zaphuhlisa ubugcisa bemfazwe kwimo yazo yangoku. Nanamhlanje izixhobo zoqeqesho zale mihla zixhaphakile kwaye kwakhona ubugcisa bekarati buphantsi kophuhliso kunye neemveliso zoqeqesho ezintsha ezinjengeWavemaster, idummy yoqeqesho lweBOB, INkosi ekugxilwe kuyo. Zonke zinento enye efanayo, ukwenza inkqubo yokulwa ejikelezwe kakuhle. Ngokufanelekileyo isixhobo sobugcisa be-karate solo uqeqesho kufuneka lusebenze kubo bonke kwaye lusekwe kwithiyori yesandi kwaye ngokuziqhelanisa rhoqo kuphuhle kwisicelo somzimba. I-ideology kunye ithiyori kuya kufuneka ithathele ingqalelo yonke imbali yetekhnoloji yokulwa yomntu kwaye inike olu khuphiswano kunye nokusetyenziswa kwesitalato. I-Martialarm Combat Training Partner Kwizinto zobugcisa bemfazwe onokuzifumana ngokwakho ngaphandle kwesikolo sokuya okanye ekungekho mntu uza kuqeqesha naye kwaye ngenxa yoko ukungabikho komlingane we-karatearm solo wazalwa. I-Martialarm ngumatshini woqeqesho lobuGcisa boMlo osetyenziselwa ukuphuhlisa ukungena kunye nokubambisa izakhono zayo nayiphi na inkqubo yobugcisa bemfazwe. Yenzelwe ukuvavanya ngenene naziphi na iindlela ukuze ukuphucula amandla okubambisa nokulawula izandla neengalo zabachasi bakho. Oku kunokwenziwa ngenxa yokuba iMartialarm ihamba kwaye isabela njengowokwenyani. I-Martialarm iyahamba kwaye iyajija, phantsi, ngasekhohlo nasekunene kanye njengokuba umchasi wokwenyani enokwenza – iyakwazi ukuqhubela phambili kwaye ibuye ibuye!. I-Martialarm yokulwa noQeqesho lwayilwa kwaye lwaphuhliswa kwezi ngcamango zilandelayo zeMartialarm Theory #1) Ukhuseleko – Kufuneka ugcine 100% ukhuseleko xa ungena kuhlaselo lwabachasi, oku kuthetha ukuba kuthintelwe naziphi na izinto ezinokuthi zenzeke ngokuzigubungela. (Iindlela zokungena kufuneka zintsokothe ​​kodwa zilula, ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo!) #2) Uhlaselo – Kuya kufuneka ubenakho ukuhlasela ngokuthanda kwakho, ngaphandle kokukhathazeka okanye ukuthandabuza. Uhlaselo kufuneka lubandakanye ulawulo olupheleleyo lwezixhobo ezichasayo. (Uhlaselo kufuneka lwenziwe ngendlela yokuba lube ngaphakathi kubo 100% ukuzikhusela!) #3) Ukuziqhelanisa – Iindlela, Uhlaselo kunye nokuzikhusela kufuneka zihambe kodwa kunganyanzelekanga ngesantya esiqhubekayo. Ukuziqhelanisa nokukhetha okulandelayo kubalulekile! Nokuba ungazikhethela ntoni kubugcisa bemfazwe, qiniseka ukuba ujonga ezimbalwa ngaphambi kokuba uthathe isigqibo kwaye u-enqire esikolweni malunga nezixhobo zobugcisa bemfazwe abazisebenzisayo ukufumana okona kulungileyo kuqeqesho lwakho. Ngaba ubuGcisa boMlo busephantsi kophuhliso?
IHumminbird Matrix 87 Indawo yokuloba iintlanzi – Ngaba Ukulungele Ukulayisha Umthwalo Omkhulu Wentlanzi Owake Wawuthatha?
Ngaba ukulungele ukubuyela ekhaya kunye nomthwalo omkhulu weentlanzi owake wazibamba? IHumminbird Matrix 87 Yindibaniselwano efanelekileyo yeempawu ezikuvumela ukuba ufumane kwaye ubambe iintlanzi ozilandelayo. Ngokukunika izixhobo zokwenza umsebenzi, Uya kuqinisekisa ukuzisa ekhaya enkulu ngokuhlwanje. Nazi ezinye zeempawu kunye nendlela ezokukunceda ngayo. Okokuqala, iMatrix 87 inikezela ngeyona teknoloji ibalaseleyo kubakhangeli beentlanzi. Ine-chartplotter ye-GPS kunye ne-sonar. Kutheni le nto imnandi kangaka? Elula. IGPS ikunceda ufumane i-hotspot yakho. Unyana uza kukunceda ufumanise ukuba yintoni apha ngezantsi, ngeenkcukacha. Oku kukunika elona thuba lokubamba iintlanzi ezifanelekileyo. Unokuphumla kwisikhephe sakho kwindawo efanelekileyo ukuze ubeke umgca wakho kanye apho iintlanzi zikhona. USonar uya kukubonelela ngolwazi oluhlaziyiweyo malunga nokuba bayaphi kwaye benza ntoni phaya ezantsi. Ukwafumana umbala wokubonakala okuphezulu kwisibonisi sakho se-intshi ezintlanu. Oku kukunika iinkcukacha ezithe kratya. Fumanisa ukuba kwenzeka ntoni ngokweenkcukacha ezicacileyo. Ngaba yintlanzi oyifunayo? Ngaba emazantsi agcwele iindawo zokufihla? I-UniMap eyakhelweyo iya kukunika isikhokelo esikhulu ukuya kuthi ga apho ukhoyo. Iya kukunika iikhilomitha ezine zolwandle, amachibi nemilambo. Jonga apho uya khona. Fumanisa ukuba iintlanzi zikhokelela phi na! Ungasebenzisa iMatrix yakho 87 ukukunceda ufumane indawo oyithandayo yeentlanzi. Okanye, kuyakukunceda ufumane eyona ndawo ingcono yokubabamba ngokukunika imifanekiso ye-sonar yezantsi. Iya kukuvumela ukuba uye kwintlanzi yakho endaweni yokulinda loo ntlanzi ukuba ize kuwe. Wenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu. Kwaye, xa ufika ekhaya kupholile kuzele ziintlanzi ezinkulu, ungavuya ukuba ingcungcu 87 yenze umsebenzi wayo! IHumminbird Matrix 87 Indawo yokuloba iintlanzi – Ngaba Ukulungele Ukulayisha Umthwalo Omkhulu Wentlanzi Owake Wawuthatha?
Itekhnoloji ihlala isiwa kumanqanaba aphezulu kumdlalo wegalufa. Izimvo ezintsha kunye neengcinga ziziswa kubadlali bawo onke amanqanaba, iminyaka, iimeko kunye nezitayile. Iingxowa zeGalufa ngokuqinisekileyo azikho. Zininzi iindlela ezahlukeneyo apha phandle onokuthi ukhethe kuzo kuxhomekeke kwindlela okhetha ngayo ukujikeleza ikhosi. Ubunzima beLite kunye nokuma kunokuba kwakho ukuba uyathanda ukuhamba ikhosi, mhlawumbi ingxowa yenqwelo okanye ibhegi yesiko engaphezulu ifanele iimfuno zakho zegalufa. Ukuba ujonga into ekwelona nqanaba liphezulu lomgangatho kunye nokuqina, Isigqibo esifanelekileyo sinokuba kukujonga ngakumbi iingxowa zegalufa zeOgio okanye iingxowa zegalufa zePing. Ezi zezinye zezona zinto zibalaseleyo ezenza iingxowa zegalufa ezikumgangatho ophezulu, Kunye neIzzo, Ingxowa yomfana, ICallaway Golf kunye neDatrek. Ukuba lula, isitayile kunye nokuqina kokukhangela, uphonononge abanye babenzi bekhwalithi ephezulu yeengxowa zegalufa. Ngaphandle kwamathandabuzo inye okanye iindlela ezahlukeneyo ezahlukileyo zikulungele. Jonga ngakumbi umgca opheleleyo weengxowa zegalufa zeOgio kunye neengxowa zegalufa zePing ezikhoyo kuwe. Iimodeli ezithandwayo zika-Ogio zibandakanya iVoltage, IVaporlite, Indawo-T. Jonga kwakhona iiPings Retro, I-Trailblazer kunye neebhegi zazo zokuma zeHoofer. Nokuba ufuna ukuphatha, inqwelo, ngokwesiko okanye ibhegi yokuhamba, kuxhomekeke kuwe. Konke kuxhomekeke kwisitayile sakho somdlalo. Abanye abadlali begalufa baneengxowa ezimbini zegalufa, enye xa beziva ngathi bafuna ukuhamba, kunye nenye yezo ntsuku xa bekhetha ukusebenzisa inqwelo etsala. Iibhegi zenqwelo zihlala zihlala zincinci kuneebhegi zokuthwala. Iingxowa zeGalufa ngokucacileyo sisixhobo esibalulekileyo kubo bonke abadlali begalufa. Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha efanelekileyo kuwe njenge, umbala, ubungakanani, ubunzima, izinto kunye nesimbo. Zininzi izinto onokukhetha kuzo, kunye nokukhetha okukhulu kakhulu okwenzelwe inani elikhulayo labafazi begalufa. Nangona sicebisa iingxowa zegalufa zePing kunye neengxowa zegalufa zeOgio, Kukho iitoni zabanye esinokuzicebisa ukuba zithembeke, yomelele kwaye ifikeleleke ngokumangalisayo. Iingcebiso ngokuthenga iiNgxowa zeGalufa
Iindawo eziDume ngeeNdawo zokuDlala iGalufa
Akukho mfihlo yokuba igalufa yenye yezona midlalo zidumileyo kwihlabathi namhlanje. Iyathandwa lihlabathi kushishino kwisakhono sonke esibandakanyekayo kumdlalo nakwizinto ezininzi ezizisa kwitafile.. Abantu bayathandana nomdlalo kwaye oko kuthetha ukuba uya kufumana ikhefu zegalufa phezulu kuluhlu lwabantu kwihlabathi liphela. Iphakheji yeholide yegalufa ngokukhawuleza iba lolunye uhlobo lweholide abantu abalifunayo kwihlabathi liphela. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze ukhetho oluncinci lokuba uza kulithatha phi kwaye nini iholide enjalo. Ye-US, kuncinci okunokubangcono kuneFlorida xa kufikwa kwiholide yegalufa. Ibandakanya ezinye zeekhosi ezindala kunye nezona zinzima ezinokufumaneka naphi na, IFlorida kudala yayindawo apho abagadi begalufa abaphezulu behlabathi behamba. Ukuba uthatha uhambo ngexesha elifanelekileyo lonyaka unokukwazi ukubamba ezinye zeetumente zePro eziqhubeka unyaka wonke. Thatha isixa semali esifanelekileyo, njengoko iikhosi zihlala zibaleka phezulu kwimirhumo eluhlaza. Kwiholide yokugqibela unokuya eYurophu. Njengomdlalo, igalufa ikhule ithandwa kule minyaka idlulileyo kubantu baseYurophu kwaye oko kuthetha ukuba kukho iikhosi ezinomdla ezikhoyo nakowona mdlali uhambele phambili. Unokulindela ukufumana iinkosi ezimbalwa kumakhonkco eYurophu njengoko iyeyona ndawo ithandwayo ngokubanzi. ICarlifonia ikwayindawo entle yeholide yegalufa elandelayo. Ngenxa yemozulu entle eza kudlala eCalifornia iikhosi zegalufa zihlala zivulekile unyaka wonke. Kukho umnyhadala weetumente ezinkulu zeemasters eziza kurhulumente kwaye iifizi eziluhlaza zingaphantsi koluhlu oluqhelekileyo. Kukho inqanaba lobunzima kubo bonke lokuziyolisa kunye neendawo ezintle kakhulu ezinokufunyanwa. ILas Vegas ayisiyiyo eyokucinga ngeholide yegalufa kodwa ayiyonyani leyo. Umntu kufuneka akhumbule ukuba abanye behlabathi abanamandla kakhulu bahlala eLas Vegas kwaye oko kuthetha ukuba bafuna ezinye zeyona ndlela ibalaseleyo yegalufa ukukhuthaza amashishini abo. Iindawo eziDume ngeeNdawo zokuDlala iGalufa
Ungancitshiswa njani umngcipheko weGolfer Elbow Injury
Ukulimala kwe-golfer elbow kufuneka kube yenye yezona nzakala zoyikekayo kuyo nayiphi na indawo yegalufa. Kwaye akunzima kakhulu ukufumanisa ukuba kutheni. Ukuqala 'ngegalufa’ Ukulimala kwengqiniba kuya kuthatha ixesha elide ukuphilisa ngokufanelekileyo kwaye kuhlala kuphinda kubuye emva nje kokuba i-golfer ibuyele ekhosini. Ukulimala kwengqiniba yegolfer kufana kakhulu nengqiniba yetennis, yeyiphi intenetya eyoyikayo ngokulinganayo. Luhlobo lokonzakala apho ugqirha uya kumisela ukuphumla ngokupheleleyo kude nezifundo. Kwabaninzi igolfer enomdla, oku kunokuba sesona sohlwayo esingaphezulu kokungxamela, kwaye kaninzi iintlungu ezibukhali ezivela 'kwi-golfer’ ukwenzakala kwengqiniba. Isizathu sokuba ukwenzakala kwengqiniba yegolfer kuthatha ixesha elide ukuphilisa kwaye kwezinye iimeko akunakuze kuphele, Kungenxa yokuba luhlobo lokulimala olubandakanya ukudibana. Ngokwesiqhelo ukwenzakala kumalungu kunzima. Esinye sezizathu kukuba kunzima ukuphumla ngokudibeneyo ngokupheleleyo kwaye umntu uphela esebenzisa izihlunu nanini na esenza nayiphi na intshukumo encinci. Ke ngoko nayiphi na ingcebiso okanye iingcebiso zokunceda ukunciphisa umngcipheko 'wegalufa’ Ingqiniba ibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na igolfer. Ukolula imithambo eyenzelwe igalufa yezihlunu ezithile okanye izihlunu ezisetyenziselwa ukudlala igalufa kunokunceda okuninzi ekomelezeni nasekulungiseni izihlunu ezichaphazelekayo. Ukomeleza izihlunu ezithile zegalufa igolfer iphelisa ukubeka uxinzelelo oluncinci kwiimisipha ezijoyina izihlunu emathanjeni ajikeleze ingqiniba. Oku kunciphisa kakhulu umngcipheko wale nzakalo kubadlali begalufa. Ukuzifudumeza ngaphambi kokuba ungene kumjikelo wegalufa kunye nokufudumala kwakhona, Ekupheleni komdlalo wakho, Kwakhona kunceda kakhulu ekunciphiseni umngcipheko wokulimala kwe-golfer elbow. Ukuzifudumeza kuqinisekisa ukuba uxinzelelo olubandakanyekayo ekudlaleni umdlalo alwenziwanga kwimisipha ebandayo, esihlala sandisa ngokunyusa amathuba azo zonke iintlobo zokulimala hayi i-golfer kuphela’ ingqiniba. Ungancitshiswa njani umngcipheko weGolfer Elbow Injury
Ukuloba luxolo kwaye kuyakhuthaza ezemidlalo nokuba uloba kangakanani na. Kulungile, Ngaphandle komnye ‘ grunion iyabaleka. El Grunionino Unyaka wonke, Iintlanzi ezaziwa njenge grunion ziqhutywa eSan Diego nakwininzi yaseCalifornia. Le ntlanzi incinci yesilivere iyazala 'ngokubaleka’ kunyuka ulwandle ngexesha lomsinga omkhulu ezinzulwini zobusuku. Ngokwenyani amawaka eentlanzi eza nje ngokugqugqisa elunxwemeni kunye namaza azalela amaqanda entlabathini emanzi. It kind of looks like the beginning of a triathalon except the participants are going the wrong way and are pregnant. The fish picked up their name from Spanish settlers because of, kakuhle, the grunting noise the make when doing their thing. It is a bit saucy now that I think about it. Ngapha koko, the grunion averages five inches in length and has a silvery hue that shows in the moonlight. With thousands in the water, it looks like the a really fat person wearing way to many sequins while dancing to disco music. You’re Inner Barbarian ‘Fishing’ for grunion requires you to get in touch with your inner barbarian. Under California law, you are not allowed to use bait, amagwegwe, poles, nets or anything. Endaweni yoko, you must physically catch the grunion with your hands. Oku, kunjalo, results in you and others running around the beach like a crab while trying to snatch the grunions. They are exceedingly quick and slippery. You’ll be huffing and puffing before you know it. Grunion are an extremely plentiful fish, but there are still rules to follow. Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, you have to go mano-a-fisho. No poles, nets or other items can be used. Isibini, you have to get a fishing license from the California Department of Fish and Game. Isithathu, you can only go grunion hunting from May to September, the legal season in the area. If you think getting in touch with your inner fishing barbarian sounds like a good time, here is the scoop on good spots. In San Diego, you should hit the beaches in Del Mar, La Jolla, Mission Beach or in front of the Hotel Del Coronado. These are all high end areas, which means the grunion must have excellent taste. Running around the beach like a madman can be tiring. Bringing along fluids [Kulungile, beer] is highly recommended. Ukugijima kweGrunion ‘ Ukuloba Ngezandla Zakho ESan Diego
Isingeniso seMartialarm kuArnis
UArnis no-Escrima ngokucacileyo bayinto efanayo yobugcisa bokulwa njengoKali, Amagama ahlukeneyo abonisa ukuba leliphi icandelo lePhilippines ubugcisa obuvela kulo kunye neenguqu ezimbalwa zendlela. U-Kali akaqhelekanga kuba ufundisa abafundi ukuba bathathe umlo kuqala kwaye emva koko bavule ngokuvulekileyo njengoko ubuchule besandla esivulekileyo busekwe kubuchule bokubambana ngentonga. U-Kali ngokwesiqhelo ubonwa njengesixhobo sokulwa, kodwa umlo ongaxhobanga unikwa ugxininiso olulinganayo. Uninzi lweendlela ezingaxhobanga zibetha, kodwa ubuchule bomlenze kunye nonyonga bokulinganisa okanye ukuphosa iqela elichasayo nabo kuyasetyenziswa. I-Espada y Daga yaseSpain yathathwa yaya eKali, kwaye ngenxa yoko izikolo ezininzi ziya kuqeqesha iindlela zekrele nemela. Iintlobo ezifanayo: Kalari Payat – Le ndlela yaseIndiya ifundisa izixhobo ezongezelelekileyo kuneKali, kodwa uvule isandla, imela, intonga, kwaye ikrele liphambili. Enkosi (Isibhengezo) – Uhlobo olusuka eBurma (ngoku yiMyanmar) apho ukulwa kwemela kugxininiswa kodwa kubambelela, ikrele kunye nesandla esivulekileyo nazo ziyafundiswa. Obona bugcisa bekarati budala kwiiPhilippines zezo bezisenziwa ngabantu bomthonyama bakwiiPhilippines. Babenxibelelana nabomthonyama baseTaiwan naseBorneo ebonakalayo kwiimbali zomlomo kunye nokufana phakathi kweendlela zabo zokulwa. Izizwe zemveli zijolise ekulweni ngezinti, imiphanda, iimela kunye namagama abanzi ngelixa uziqhelanisa neefom zokulwa zingaxhobanga njenge-dumog. AmaPhilippines’ Iindlela ezivavanywe emfazweni zingqineke zisebenza ngobuchule ukusuka kwi-engile yezixhobo zehlabathi zakudala kunye nokungqubana kwezandla. Amagcisa omlo asePhilippines anobuchule ahlala ebonakaliswa yimeko ye “ukuhamba” leyo iphendula ngokukhawuleza, Unokusetyenziswa, agile, ubhetyebhetye, iyabulala, iyasinda, nozinzo. Uqeqesho lwe-Escrima lunokwenziwa nakweyiphi na idolophu emhlabeni kwaye ndiyakukhuthaza ukuba undwendwele umkhombandlela wezobugcisa be-kartial wase-Escrima ukuze ufumane isikolo kufutshane nawe! Isingeniso seMartialarm kuArnis
Ukuzingela iTurkey kulucelomngeni, inomdla kwaye kwezinye iimeko iba likhoboka. Iimvakalelo zeTurkeys zinomdla kakhulu – nokuba intliziyo yakho ibetha ngamandla ingenza ukuba i-turkey inyamalale njengomsi womsi. Uncedo olusisiseko ekuzingeleni iTurkey Phambi kokuba uzingele iturkey yasendle, kufuneka uzifumene. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukufumana indawo ngokubanzi yeeturkey indawo yokuhlala. ?Fumana imephu elungileyo yendawo oceba ukuyizingela. ?Ukutswina okanye ukusebenzisa umnxeba wasendaweni ekuthiwa yi-owl hooter okanye unomyayi okanye umnxeba we-turkey ukuzama ukufumana impendulo. Xa usiva i-gobbler, phawula imephu yendawo. ?Khangela eyona ndawo ifanelekileyo ngeenyawo. Jonga iimpawu zokukrwela kweentaka, ilindle leentsiba. Olu lwazi lunokukunceda ufumane iindawo ezithile. Jonga imingxunya yodaka, Iibhanki zomlambo, amadlelo, iindlela log, fencerows njl. iihambo ezininzi kangangoko kunokwenzeka. ?Ungaze uzame ukusondela kakhulu kwi-turkey. Amehlo eturkey, Iindlebe kunye nokwazisa amaxesha amaninzi angcono kunokwakho. ?Khetha umthi obanzi kunamagxa akho. Oku kuya kukukhusela kwabanye abazingeli abanokuza emva kwakho kwaye ngempazamo bacinge ukuba uyi-turkey yokwenyani. ?Ukufihla kuphantse kube yimfuneko ukunqanda ukubonwa. Iiturkey zasendle zinombono onomdla. Abazingeli abaninzi baseTurkey bahlala benxiba isuti ye-camo, ikepusi, yobuso, iiglavu, vest ngeepokotho ezininzi zokuthwala iifowuni kwaye mhlawumbi nesidlo. Kananjalo ungalibali ukunxiba iikawusi ezinemibala emnyama ukuze xa uhlala phantsi, ngekhe bakubonise. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule: intshukumo yakho ibaluleke ngakumbi; nokuba uzifihle kangakanani. Ayenzi ukuba ubonakale ngokupheleleyo. Nangona ufihle, usengumntu ongaqhelekanga ehlathini. Ukuhamba lolona tshaba lukhulu lomzingeli weTurkey. I-turkey inokukufumanisa 10 amaxesha akhawulezayo kunokuba uyayiqonda iturkey. ?Eyona mpu ibalaseleyo kunye neembumbulu zokuzingela iTurkey yindibaniselwano ehambisa ubukhulu, ipatheni yokubetha kanzima e 40-45 iiyadi. Ziqhelanise nokujolisa ekuboniseni ii-turkeys ezibalulekileyo entloko nasentanyeni. La macandelo ngawona kufanelekileyo ukuba udubule. Kuya kufuneka ubuncinci 8-10 iipellets kwindawo ebalulekileyo e 40 iiyadi.? ?Musa ukuzifihla kakuhle kangangokuba awukwazi ukubona ukuba kwenzeka ntoni. Iimfama ziluncedo kumzingeli weTurkey, kodwa xa yakhiwe kakuhle kangangokuba umbono uyaphazamiseka, ayisaboni, kwaye yindawo yokuzifihla, njengenzuzo kwiTurkey njengoko injalo kuwe. ?Yeka ukusebenzisa iifowuni zokuhamba. Nangona le fowuni ngamanye amaxesha inokuvelisa, kukwayingozi enkulu. Kwiindawo ezinabazingeli abaninzi, ungatsala abazingeli kuwe kunokuba turkeys. ?Ungaze unxibe obomvu, iimpahla ezimhlophe okanye eziluhlaza okwesibhakabhaka. Le yimibala yentloko yeebhabhu – Eyona nto kujoliswe kuyo ngumzingeli weTurkey. ?Ukuba omnye umzingeli usebenza intaka, sukuphazamisa yonke into ngokuzama ukubiza intaka kuwe okanye ukoyise intaka. Oku akufani kakhulu nezemidlalo. Abazingeli bokwenene nabanamava abayenzi loo nto. Iingcebiso ezisisiseko zokuzingela iTurkey
Ukuhamba kweTiger Woods Golf
Ukujija igalufa likaTiger Woods lelinye elidala amandla amaninzi kwaye ngamanye amaxesha kumfaka engxakini. Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ube yeyona golfer inye ehlabathini, ukujija kwakhe kwegalufa iTigers kuhle kakhulu ngekhe utsho? Yintoni eyona nto iphambili ekufezekiseni i-swing efanayo ne-Tigers? Kukho izinto ezimbalwa ekunene phezulu apho nayiphi na igolfer nokuba ungadala kangakanani okanye ubuchule obunokufezekisa unikezwe intwana 'yokuphuma ikhosi’ uqeqesho emzimbeni wakho! Jikelezisa umzimba wakho. I-Tiger yenza oku ngamandla omxholo wayo. Ngokukhulisa isiseko esomeleleyo ukusuka kwindawo yokujikeleza, Uya kongeza iiyadi ezininzi kwiimoto zakho. Ixesha loku 'kuhlala kunxibelelene’ ngalo lonke ixesha ujika igalufa. I-Tiger ihlala ilwa nomzimba wayo osezantsi oya phambili komzimba wayo ophezulu ngexesha lokuhla (uyabambeka), ke uzama ukugcina iingalo zakhe kunye neklabhu phambi kwesifuba sakhe ixesha elide kangangoko anakho. Oku kukhuthaza ukulandelelana okungcono kokuhla, oko kumbeka kwimpembelelo kwindawo enamandla kakhulu. Zininzi izinto zokuzibhola onokuzenza ukufezekisa ukujikeleza komzimba. Ukuncamathelisa itawuli phantsi kwamakhwapha omabini ngelixa ujika isuntswana lenye indlela. Ukuba itawuli iyehla, iingalo zakho ziye zaqhawuka emzimbeni wakho. Jika uye kugqibe ngokupheleleyo. Uya kuqaphela kuninzi lwee-Tigers shots ujikeleze ngokupheleleyo kwindawo yokugqiba. Kuphela kuxa ebetha inqindi okanye eyibhutyuza ibhola engaphelelanga. Esi sisalathiso iTiger ejikeleza ibhola, hayi ukubetha kuyo. Xa ujolisa ekujikelezeni ibhola, uya kufumana umgama wakho uya kwanda, Kunye neendlela zakho ezilungileyo xa usiya kwi-tee. Uninzi lwethu luthanda, i ‘hit’ Ithuku yinto esilwa ngayo ngalo lonke ixesha. Kulula kakhulu ukuthi sonke asinakho ukuba neTiger Woods swing golf kwaye oko kuyinyani. Kodwa ukusebenzisa ezi ntshukumo zimbini zingasentla kwi-swing yakho kuya kwenza imimangaliso. Into eseleyo isebenza kumzimba wakho 'ngaphandle kwendlela'. Igalufa ayisabonwa njengomdlalo wokuzonwabisa. Yintshukumo yeembaleki efuna inqanaba eliphezulu lomgangatho othile wegalufa ukuba ufuna ukudlala ngokusemandleni akho! Ke sukuzama ukuyikopa, kodwa cinga ngamalungu aqhelekileyo onokuwenza'kwaye ubuncinci uza kujongeka ngathi uneTiger Woods ujingi wegalufa! Ukuhamba kweTiger Woods Golf
I considered it insulting and inexplicable when I heard that Allen Iverson got left out of the Dream Team by Jerry Colangelo. The executive and managing director of the United States Men’s National Team made a sure mistake when he decided not to ask Iverson to the tryouts in Las Vegas this summer. The Dream team has not been giving out its best results since 2004 but then again the U.S. wasn’t represented by its best talent in Athens or Indianapolis if you don’t send the best you’ve got don’t expect the best results. But this time the nation’s superstars where standing in line to represent the country and bring back some glory. The selection committee chose seven of the eight leading scorers in the NBA, but they left Iverson behind. Colangelo said it was because the team needed distributors. Iverson’s age has also been used as an excuse and not a exactly a bad one when you think that Iverson will be 33 when the Beijing Olympics are played outside 2008, but Bruce Bowen will be 37, Chauncey Billups and Antawn Jamison will be 32, so for the others age isn’t a legitimate argument to keep him out. Kwaye, Iverson has yet to slow down. Iverson is not without his flaws, but he is one of just two NBA players — along with Dwyane Wade — who rank in the top 10 in scoring and assists. Kobe Bryant, the league’s leading scorer, ranks 28th in assists. This team is talented enough to win with or without Iverson, but he should’ve at least been given the opportunity to compete. If he misses out on making the final roster of 12, then fine. But Iverson has earned the right to be there, not only because of his past with USA Basketball but because he remains at the top of his game although he’s a few months shy of his 31st birthday. He deserved better. Allen Iverson’s Exclusion from the Dream Team is a Clear Mistake
IArsenal yabeka umlo olungileyo
Abalandeli beBarcelona banelungelo lokonwaba emva kwayo yonke into bazithwesa ngesiqingatha sabo seNdebe yabo yesibini yaseYurophu, oku akuthathi ndlela yokuba nathi sinika imbeko kwiArsenal ethe emva kwayo yonke into yangqina liqela elikhulu. IArsenal yenze umsebenzi omkhulu kwaye yadlala umdlalo omkhulu ayothusi into yokuba bekunzima ukuyibetha. IArsenal iqale kakuhle kwaye kubonakala ngathi xa umdlali ekhutshelwa ngaphandle kunzima nangakumbi ukophula icala elinye nalo litshintshe umdlalo ngendlela ephawulekayo. Xa befumene inqaku labanceda nangakumbi kuba nakweliphi na iqela lebhola ekhatywayo injongo ithemba kwaye ikhawulezisa isingqisho kunye nomoya. UFrank Rijkaard, ophumelele kathathu iNdebe yeYurophu njengomkhuseli kunye ne-AC Milan kunye ne-Ajax Amsterdam, ujoyine uluhlu oluncinci njengoko waba yindoda yesihlanu ukuphumelela ukhuphiswano njengomdlali kunye nomqeqeshi. Kolu luhlu ujoyine umqeqeshi weReal Madrid uMiguel Munoz, UmDatshi uJohan Cruyff, kunye namaTaliyane uGiovanni Trapattoni noCarlo Ancelotti. Ndiqinisekile ukuba ukuba uyonwabele njengomdlali ngokuqinisekileyo uya kuyonwabela ngoku. Inyani yile yokuba emva kokuba inqaku lokulinganisa liza kwiBarcelona izinto zaphazamiseka, kwakubaluleke kakhulu kwaye yanciphisa imeko yengqondo yeArsenal njengeqela elinomdlali omnye. Emva koko iBarcelona yangena kulawulo kwaye kwakumnandi ukuba baphumelele umdlalo okhethekileyo. IArsenal yabeka umlo olungileyo
Amandla oQeqesho lokunyuka
Ekunyukeni, kukho intetho endala echaza oko “ukunyuka lolona qeqesho lubalaseleyo lokunyuka,’ intetho esetyenziswa ngabaninzi ukwenza izizathu zokungaqeqesheki ngaphandle kokunyuka. Andivumelani nalefilosofi njengoko ndiza kuchaza. Xa sithetha ngezakhono ngqo ezifunekayo ekukhuphukeni, njani kwaye nini inyathelo, ubuchule bokunyuka nezakhono zengqondo, akukho sithatha indawo yomsebenzi wokuzinyuka. Nangona kunjalo, ukuze kuphuculwe amanqanaba amandla athile kwimidlalo yokunyuka njengokuphucula ukubambelela kwamandla kunye namandla omzimba aphezulu kunye nokunyuka okunyamezelayo kuya kuvelisa kakhulu okanye kungabikho ziphumo okanye kuphuculo. Esinye sezizathu eziphambili zokukhuphuka ayilunganga uqeqesho lwamandla kungenxa yokuba ukungaphumeleli ukunyuka akuyiyo inketho. Ukuba usilele kwimisipha ngelixa ukhwela, inokungqina ukuba iyabulala. Ke injongo ngelixa ukhwela i-id ukunqanda oku ngokupheleleyo. Ngenye indlela, xa umntu eqeqesha ngamandla ukunyuka, umntu ufuna ukufikelela kwaye agqibe kwinqanaba lokusilela kwemisipha njengoko sisisenzo esenza ukuba umzimba uphendule ngokwanda kwamandla ukuze uvumelane noxinzelelo olubekwe kulo. Ke ezi ndlela zimbini ziyahambelana kwaye awusoze ufezekise amandla aphezulu ngokunyuka wedwa. Omnye umzekelo oqinisa ukungafani phakathi kokunyuka kunye noqeqesho lwamandla okunyuka yindlela obamba ngayo iliwa. Ekunyukeni, Iliwa lifuna umkhweli ukuba asebenzise iindidi ezahlukeneyo zezikhundla ezahlukeneyo zokubambelela kwaye, ngamanye amaxesha, usenokuyitshintsha ngabom indlela obamba ngayo iliwa. Nje ngeziphumo, akunakulindeleka ukuba nasiphi na isikhundla sokubambelela esinye sisebenze ngokugqibeleleyo kwaye, ngoko ke, izikhundla zokubambelela komntu ngamnye (umz. crimp, vula isandla, cinezela, njl.) bayacotha ukonyusa amandla. Oku kuya kukunceda uqonde ukuba kutheni ixesha elipheleleyo lokunyuka kunokuphucula ukunyamezela kwakho kwe-anaerobic (oko kukuthi. unyamezelo lwamandla), kodwa ungenzi nto encinci ukukonyusa ngamandla amakhulu. Ke ngoko, Izikhundla zokubamba ezahlukileyo sisicwangciso-qhinga esikhulu sokwandisa unyamezelo xa unyuka usenza intsebenzo, kodwa ayisoze isebenze kuqeqesho lwamandla aphezulu okubamba. Ukusebenza ngamandla koqeqesho lomnwe kufuna ukuba ujolise kwindawo ekubambelele kuyo kwaye uyisebenze kude kusilele, enokwenziwa kuphela ngokukhuselekileyo kwindawo enganyukiyo. Ekugqibeleni, Kungangcono ukuba abanye abakhweli bathathe inxaxheba kuqeqesho lomnqamlezo kunye neminye imisebenzi engachazwanga ngokukodwa kwezemidlalo. Njengomzekelo umntu ofuna ukunciphisa umzimba kufuneka achithe uninzi lwexesha labo elinganyukiyo esenza umsebenzi we-aerobic ukutshisa amanqatha omzimba njengoko kubalulekile ukuba umntu okhwela ancike kangangoko kunokwenzeka ekusebenzeni kakuhle. Ukuba umntu akanayo ngokupheleleyo imodicum yokomelela komzimba, baya kuba ngcono ngokwenza uqeqesho lwesekethe oluya kubanika amandla kunye nezibonelelo ze-aerobic. Ukuvala ndiza kuthi nokuba unganaliphi inqanaba lamava ekukhuphukeni, Uya kubona uphuculo olukhulu ngokubandakanya uqeqesho lwamandla athile kwirejimeni yakho. Fumana zonke izixhobo ozifunayo zokunyuka eRuggedSportsGear.com uQeqesho lwaMandla lokuQala
Izibonelelo zejenali yoqeqesho elungileyo
Uninzi lwethu luqeqeshe kwindawo enye ebomini bethu. Amathuba ukuba ukhe waluthatha nzulu uqeqesho lwakho uye wasebenzisa ijenali yoqeqesho okanye ilogi yoqeqesho. Umahluko ophambili phakathi kweejenali zoqeqesho kunye neelog zoqeqesho, yinto oyibhalayo kuzo emva kokuzilolonga okanye usuku ngalunye, njl. Iijenali zoqeqesho zinjalo. Zininzi zejenali endaweni yelog. Ngokuqhelekileyo baya kubandakanya izinto ezifana nempilo yengqondo kunye nendlela oziva ngayo emini okanye ekusebenzeni kwakho. Banokufikelela kancinci kulwazi oluthile lweenkcukacha-manani kodwa oku ngokuqhelekileyo kugcinelwa ilog yoqeqesho. Izikhuni zoqeqesho ngokubanzi zenziwe ngohlobo oluthile lwetemplate. Umzekelo. Yonke imihla ugcwalisa ifomu enamasimi afanayo. Izinto ezifana nobunzima bangoku, ukuzilolonga kwemihla ngemihla, ulwazi lokutya, zizinto zonke ezinokufakwa kwiLog yoqeqesho ngosuku nosuku. Andiyi kucebisa ukuba uhambe yonke indlela enye okanye yonke enye, zombini ukujolisa kunye nokugawulwa kwemithi kubalulekile ukugcina imbali esebenzayo yexesha lakho elidlulileyo. Ndifumene ngamava kwaye ngenxa yokuba kube lula kulungile ukuba ezimbini zidityaniswe ngandlela thile.. Ngale ndlela kusoloko kulula ukukhumbula ukwenza zombini. <B>Iinzuzo zokurekhoda uqeqesho lwakho</B><BR>Inzuzo yokuqala yokubuyisela kwakhona uqeqesho lwakho kukuba nembali eneenkcukacha zokujonga emva. Oku kunokuba luncedo kakhulu ngamaxesha ocwangciso. Umzekelo ukufumanisa oko kukusebenzele kwaye yintoni engasebenziyo. Kuluncedo kakhulu ekufumaneni izizathu zokwenzakala okanye ngamaxesha okudinwa. Ngaba ukhe wahlala phantsi waza wazama ukucwangcisa uqeqesho kungekho nto usebenza nayo? Ukuba unento yokujonga emva kwiakhawunti eneenkcukacha ngento oyenzileyo kwezi veki zimbalwa zidlulileyo kulula ukucwangcisa kwangaphambili, kunye nokwandisa ngokufanelekileyo ukuqina kwakho kokuzilolonga, njl ukuphucula ikamva. Ijenali eneenkcukacha ikwalungile ukuba ube nayo nje uyisebenzisela ubuqu, kunye nokukwazi ukujonga emva kwiinyanga neminyaka edlulileyo, ukukhumbula iiakhawunti ezahlukeneyo. Zive ukhululekile ukuphinda uliprinte eli nqaku ukuba nje ugcina i-caption elandelayo kunye ne-biography yombhali ngobuchule nazo zonke ii-hyperlink. Iingenelo zoqeqesho olulungileyo? Ijenali
Izinto eziluncedo nezingeloncedo zokuLoba ngokuLoba kwiCanoe
Some people like to fly fish from their canoe. But there are advantages and disadvantages to this unusual combinations of activities. People usually fly fish from land, standing still in water or from a larger boat. Fly fishing from a canoe may seem crazy at first, but there are many advantages to be had. There are also disadvantages, but after you overcome them, you are sure to have a wonderful fishing adventure. Izinto ezingalunganga Kuya kufuneka woyise ezinye izinto ezingalunganga ngaphambi kokuba uzame nokubhabha iintlanzi ngephenyane. Unokukufumanisa kunzima ekuqaleni ukugcina ulawulo lomgca wakho kuba ukufuphi emanzini kunesiqhelo. Ukuba ubambe intlanzi, usenokukufumanisa kunzima ukuphinda ungene ungakhange uthabathe iphenyane. Ngokukodwa ukuba yintlanzi enkulu! Enye into engalunganga inokuba kukuthanda kwephenyane ukuphazamisa amanzi. If you can stay motionless and are accustomed to the boat then disturbing the water will not be a problem. When you get over these few disadvantages, you will experience the best fishing ever! Advantages The advantages of fly fishing in a canoe are significant if you can overcome the disadvantages listed above. Being in a canoe lets the fisher go over more water quickly. This is essential for good fly fishing. You can also get into untapped fishing holes that otherwise they would not have been able to reach. Iindawo ezinjalo zihlala zingavumeli amaphenyane eemoto, ke iphenyane libalasele! Enye inzuzo kukuthula. Azinazo iinjini ezikhulu okanye iiphelelisi, agudileyo kuphela, ukurola okuthe cwaka. Le yinto ebalulekileyo kubalobi beempukane! Ukuba unesikhephe, ukulungele ukuzama ukuloba iimpukane. Kuluncedo kuwe ukuba ube nelona phenyane lifutshane ungalifumana. Iphenyane elifutshane liya kwenza ukuba ukuloba iimpukane kube lula kakhulu. Yizame ngelinye ixesha. Kuyaphumla kwaye kuyonwabisa. Izinto eziluncedo nezingeloncedo zokuLoba ngokuLoba kwiCanoe
Ukuthintela ukwenzakala kweGalufa
Ukulimala kwegalufa yenye yezona zinto zixhaphakileyo kubo bonke abadlali begalufa. Kodwa ukuba namandla ngokwaneleyo kunye nokuguquguquka kwezihlunu kunye namalungu kunye nokuthatha inxaxheba kuqeqesho olusebenzayo, inokuthintela ukwenzakala kwegalufa. Imilenze efanelekileyo kunye namalungu aphantsi kolawulo xa uxinzelelo lwe-swing luhlangatyezwa luya kunciphisa kakhulu umngcipheko wokonzakala kwegalufa. Ukuba ukunyakaza komzimba wakho kungaphandle kolawulo xa usenza ujingi, izihlunu kunye nemisipha zinendawo encinci yokwenza impazamo. Isiphumo sinokulila okanye i-tendon exineneyo okanye i-ligament'ukugcina ikhosi ngokungapheliyo. Ujingi wegalufa yintshukumo enzima (ubuchule). Ukuze wandise umgama kunye namandla, Kuya kufuneka ube nenqanaba eliphezulu lokuguquguquka (Uluhlu lokuhamba) kunye nokunyanzelwa kwamalungu abandakanyekayo. Oku kubandakanya amagxa, umva kunye nesinqe. Kwaye xa ujonga iindawo zengozi yegalufa, ezi ndawo zikhankanywe apha ngasentla ziphezulu kuluhlu. Yiya kubalo! Gcina ukhumbula ukuba ngenqanaba eliphakathi lomndilili wamandla kunye nokuguquguquka kunye neendlela zokujija, awuyi kunciphisa kuphela ukwenzakala kwegalufa, kodwa uphinde uphucule umgangatho womdlalo wakho. Abadlali abaninzi begalufa bacinga ukuba basempilweni ngokubanzi kwaye bayakwazi ukudlala umjikelo wegalufa ngaphandle kokonzakala kwegalufa ’kunjalo, Ndivile kwaye ndifunda amaxesha amaninzi apho i-golfer yenzakala khona kwikhosi yokuthunga iklabhu yegalufa. Ngaba oko kwenzekile kuwe okanye umhlobo wegalufa? Kwenye indawo ndafunda ubalo olusuka 10 Kwiminyaka eyadlulayo. Kwakugqityiwe 39,000 Ukulimala kwegalufa kunyangwe kumagumbi kaxakeka emva 1995! Wowu! Ayikholeleki loo nto! Njani ngako konke ukonzakala okungakhange kuxelwe okanye okuphathwa yile golfer ngokwakhe? Okanye njani malunga nokulimala okungapheliyo kwegalufa i-golfer 'ihlala nayo’ Ukuze ukwazi ukudlala igalufa? La manani avela 10 Kwiminyaka eyadlulayo! Kazi yintoni ngoku? Ndilapha ukukuxelela igalufa ngumdlalo womzimba kwaye ngaphandle koqeqesho olufanelekileyo, uya kongezwa kuloo nombolo ikhankanywe apha ngasentla. Andiqondi ukuba yinto enzima ukuthengisa ukuba ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yamandla egalufa kunye nokuguquguquka kuya kukunceda uphephe ukwenzakala kwegalufa. Ukuthintela ukwenzakala kweGalufa